December 5, 2016 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန
သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန
စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး ၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ
အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ
ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ
စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ
Posted on December 5, 2016 (March 13, 2020) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ နိဒါန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် (က) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ အဆို(သို့မဟုတ်) အစီရင်ခံစာ၊ ဖြေကြားသော အဖြေများ၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စနစ်တကျ စိစစ်ရန်၊ (ခ) ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်းရှိ/မရှိ မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်သည့်အခြေအနေထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ထိရောက်မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ပါရန်၊ (ဂ) အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများအား ကော်မတီမှ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် စိစစ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိမှုဖြင့် […]
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ပြုလုပ်နေသော စက်ရေ တွင်းနှင့် လမ်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့
Posted on December 5, 2016 by bgoper
ရွှေတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်ဝေသည် (၃.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ မြို့မအုပ်စု၌ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ပြုလုပ်နေသော စက်ရေ တွင်းနှင့် လမ်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ […]
အမျိုးသမီး အိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်းပညာ သင်တန်းကျောင်း ပထမအပတ်စဉ် သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့
ဖြူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နွယ်နီဝင်းသည် (၂.၁၂.၂၀၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး အိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်းပညာ သင်တန်းကျောင်း ပထမအပတ်စဉ် သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး […]
ပြည်သူလူထုအတွင်း နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအသိပညာပြန့်ပွားစေရန် ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား Civic Education သင်တန်းပေးပွဲ
အုတ်ဖို မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောသူအောင် သည် (၂.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းမ၌ ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်သော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအတွင်း နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအသိပညာပြန့်ပွားစေရန် […]
အစိုးရနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ Website များ
တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
စာသင်ကျောင်းများ တည်ဆောက်‌မည့်မြေနေရာကြည့်ရှုပြီး ပန္နက်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားတက်ရောက်
ဘိလပ်မြေဖျော်စက် စက်သစ်တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
မြို့နယ် Covid-19 ကာကွယ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်
တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အသိပေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်
အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ website များ
လိပ်စာ − မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်−မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
© Copyright 2016, All Rights Reserved. This is the official website of Bago Region Hluttaw. Developed By: Host Myanmar.